Scorpio boka renyeredzi: hunhu, kuumbwa uye ngano | Network Meteorology
Scorpio boka renyeredzi
ChiGerman Portillo | 14/05/2021 09:30 | Yakagadziridzwa ku 14/05/2021 09:32 | Kuongorora nyeredzi
Tinoziva kuti mudenga mune mhando dzakasiyana dzemauto. Iyo seti yeredzi dzinovheneka dzakabatana mafomu uye kuti kumashure kwavo kune ngano uye nhoroondo. Mune ino kesi, isu tichataura nezve iyo scorpio boka renyeredzi. Iri boka renyeredzi rinoonekwa mudenga uye riri padyo nepakati peMilky Way. Iri zvakare padyo neecliptic ndege sezvazvakaita nezvimwe zviratidzo zvezodhiac.
Naizvozvo, isu tichaisa ichi chinyorwa kukuudza zvese hunhu, mavambo, ngano uye kuda kuziva kweboka renyeredzi reScorpio.
2 Chimiro uye chinzvimbo cheyeredzi renyeredzi Scorpio
3 Scorpio boka renyeredzi ngano
4 Nyeredzi zvinoreva uye kuda kuziva
Iyo ndeimwe yemapoka akareruka ekuwana, kunyangwe iwe uri wekutanga pakuona. Icho boka renyeredzi rezodhiac riri pakati penzoka uye nekwere. Nyeredzi dzakapenya kwazvo mune ino nyeredzi dzinotora mufananidzo unoyeuka chimiro chechinyavada, saka izita rayo. Tinofanira kuziva kuti zodiac inzvimbo yedenga nzvimbo iyo ecliptic inopfuura uye kwatingawane nyika. Iri zita rinoreva chokwadi chekuti mapoka enyeredzi aionekwa nemaGreek aienderana nemhuka chaidzo kana dzemungano. Ndipo panobva zita rezodhiac.
Mukati meyeredzi reScorpio tinowana dzimwe nyeredzi dzakapenya kupfuura dzimwe, sezvazviri mune angangoita mapoka enyeredzi. Mune ino kesi, nyeredzi inopenya muboka renyeredzi inozivikanwa nezita reAntares. Iyo inoonekwa bhanari nyeredzi inoonekwa senge tsvuku hofori nyeredzi ine dhayamita kakapetwa mazana matatu kupfuura zuva Tinofanira kufunga nezvehukuru hwenyeredzi iyi sezvo zuva redu ratoita kunge diki.
Nyeredzi yechipiri yeboka renyeredzi Scorpio ine dhayamita chete yakapetwa kaviri yezuva. Nekudaro, ingangoita zvakapetwa mazana matatu, saka unogona kuchiona kunyangwe chiri chinhambwe. Iko kunoonekwa kukosha kwekuona kweiyo bhurari system ndeye 300. Masayendisiti akawana imwe extrasolar planet iri padhuze ne makore angangoita gumi nemaviri nemazana mana echiedza kubva pasi pano mune renyeredzi Scorpio. Nyika yekuwedzera inozivikanwa zvakare nezita rekuti exoplanet uye ndiyo inotenderera ichitenderedza chero nyeredzi isiri zuva redu.
Naizvozvo, icho chikamu chemamwe masystem epuraneti akasiyana needu. Kuvapo kwemapuraneti aya kwafungidzirwa kwenguva yakareba, kunyange hazvo isina kuwanikwa kusvika kuma90. Nekuda kwehunyanzvi hwekuvandudza matekinoroji uye maitiro ekuona, chiuru exoplanet chakawanikwa. Yekutanga exoplanet kuwanikwa ichitenderedza main sequence nyeredzi yaive 51 Pegasi b, yakawanikwa muna 1995 naMichel Mayor naDidier Queloz weGeneva Observatory. Nyika ino ine huremu hwakaenzana neiyo yaJupita. Kubva ipapo mapuraneti anodarika zana akawanikwa nemapoka akasiyana epasi rese. Mamwe emapuraneti aya ari muboka renyeredzi reScorpio, senge ratataura pamusoro apa.
Chimiro uye chinzvimbo cheyeredzi renyeredzi Scorpio
Nyeredzi inopenya muScorpio inonzi Qualbu'l-Agrab nemaArabu, iyo "Moyo weScorpion," nekuda kwenzvimbo yayo. VaGiriki vakadana zita rinonakidza kwazvo, Antares, zvinoreva kuti Counter-Mars. Zita iri rakakonzerwa neruvara rutsvuku uye nenyaya yekuti Mars nenyeredzi iyi vanenge vari mudenga rimwe chete. Kamwe mupfungwa iyo nyeredzi tsvuku, zviri nyore kwazvo kuziva iyo pincers uye inoridza scorpio. Chinyowani ichi chinoonekwa chete munguva yezhizha, kunyangwe mune dzimwe nzvimbo kumaodzanyemba hachina kukwana.
Iri boka renyeredzi rine huwandu hukuru hwenyeredzi uye makumi matatu ezvakanakisa ndeaya anotevera:
Antares: Sezvatakambotaura, ndiyo nyeredzi yepakati uye iine ruvara rutsvuku nehupamhi hwakakura kupfuura hwezuva.
Akrab: Iyo inozivikanwa zvakare nezita rekuti Grafias uye vara rayo riri bhuruu chena.
Dschubba: Iyi nyeredzi ine bhuruu-chena ruvara uye iri kumberi kwechinyavada.
Shaula: ndiyo nyeredzi iri mune chinoruma chinorwadza uye iri pamberi penyeredzi inozivikanwa nezita rekuti Lesath.
Twill: Inowanikwa makore zana nemakumi mapfumbamwe kubva kuepuraneti uye zita rayo rinobva kuMesopotamia.
Scorpio boka renyeredzi ngano
Ehe, iro boka renyeredzi rinofanira kuperekedzwa nerayo ngano. Zvinoenderana nengano iyi, kuti aroore Merope, mwanasikana wamambo, muvhimi ane ruzivo Orion aifanira kusunungura Chios Island kubva kumhuka dzese dzesango dzaivepo. Achiona kuti aisakwanisa kuiwana, mambo akamisa muchato. Orion, akatsamwa, akatanga kuuraya mhuka dzese dzemusango. Izvi zvakaita kuti Gaia, mwarikadzi wePasi, abude. Kudzivirira izvi, akatumira chinyavada chidiki asi chine njodzi kudzivirira Orion kuzadzisa chinangwa chayo.
Pasinei neizvi, Atemisi, mwarikadzi wekuvhima, akayemura zvikuru Orion uye aida kumudzivirira kusvika kumagumo. Nenzira iyi, akakwanisa kugadzirisa kunetsana nenzira yakapusa. Akaisa yega yega kune rimwe divi redenga. Naizvozvo, Orion uye chinyavada zviri kure chaizvo kubva kune mumwe nemumwe. Izvo zvakanyanya zvekuti ivo vakaparadzaniswa, zvekuti vaviri vacho havagone kuonekwa panguva imwe chete.
Nyeredzi zvinoreva uye kuda kuziva
Kana zviri zvinoreva nyeredzi, vanhu vanozvarwa pasi pechiratidzo cheScorpio vazere nekuzvivimba uye vane zvitendero zvakasimba. Nekuda kukuru, vanozoita godo uye vatsiva. Ivo vakatendeseka chaizvo uye vakatendeka, saka kunyangwe zvazvo dzimwe nguva vachinzwa kurwadziwa, maonero avo anogona kuve akakosha kwazvo. Icho chinhu cheScorpio imvura.
Ngatione kuti ndeapi makuru ekuda kuziva eiri boka renyeredzi:
Ndiro boka renyeredzi rine huwandu hukuru hwenyeredzi kupfuura zvarakaita hukuru hwakaderera pane gumi neshanu.
Nguva zhinji inobatana nemwedzi kunyangwe paine nzvimbo yekumaodzanyemba. Neiyi nzira, inokwanisa kupa show inokosheswa zvikuru neavo vanozvipira pachavo kumifananidzo yekutenga.
Icho chiri cheboka rakasarudzwa renyeredzi dzakaparadzirwa nenyeredzi dzinoenderana nezita raro.
Ndinovimba kuti neruzivo urwu unogona kudzidza zvakawanda pamusoro peyeredzi rezvinyavada nehunhu hwayo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Network Meteorology » Kuongorora nyeredzi » Scorpio boka renyeredzi
Köppen mamiriro ekunze